China TS3 Wireless Remote-Controlled Life Buoy mpanamboatra sy mpamatsy | Topsky
Ny buzy Remote control an-tariby tsy misy tariby dia robot manavotra aina ambonin'ny tany izay azo alefa lavitra. Izy io dia azo ampiasaina betsaka amin'ny famonjena ny rano latsaka ao amin'ny dobo filomanosana, fitoeram-be, renirano, morontsiraka, yachts, sambo, ary tondra-drano.
Ny fanaraha-maso lavitra dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso lavitra, ary ny fandidiana dia tsotra. Ny hafainganam-pandeha tsy ampiakarina dia 6m / s, izay afaka mahatratra haingana ilay olona nianjera tao anaty rano hamonjy. Ny hafainganam-pandehan'ny olona dia 2m / s. Misy jiro fampitandremana fidirana an-tsokosoko amin'ny lafiny roa, izay afaka mamantatra mora foana ny toeran'ny mpamono aina amin'ny alina sy amin'ny toetr'andro ratsy. Ny vanja manohitra ny fifandonana eo aloha dia afaka misoroka tsara ny fahasimban'ny vatan'olombelona mandritra ny dian'ny dia. Mampiasa fonosana fiarovana ny propeller mba hisorohana ireo zavatra vahiny tsy hiolakolaka. Ny ilany voalohany amin'ny buoy fiainana dia misy bracket fakan-tsary, izay azo apetraka amin'ny fakantsary handraketana ny mombamomba ny famonjena. Ny life buoy dia manana rafitra GPS natsangana izay afaka mahatsapa ny fametrahana azy tsara.
Raha sendra lozam-pifamoivoizana an-drano dia azo apetraka ny mpamono aina, ary ny toerana misy ilay olona latsaka anaty rano dia azo jerena tsara amin'ny alàlan'ny fametrahana GPS, ny fanekena horonantsary, ny famantarana ny tanana, sns. azo ampiasaina hahatratrarana ny toeran'ny olona latsaka anaty rano hanombohana famonjena. Ireo latsaka anaty rano dia miandry famonjena, na mitondra ny vahoaka hiverina any amin'ny faritra azo antoka amin'ny alàlan'ny rafitra herinaratra, izay nahazo fotoana sarobidy ho an'ny famonjena ary nanatsara be ny tahan'ny fahaveloman'ny olona latsaka tao anaty rano. Rehefa manakiana ny toe-javatra misy ny olona latsaka anaty rano dia afaka mitondra mpamonjy voina ny mpamonjy aina mba hanatona haingana ilay olona latsaka ao anaty rano hamonjy azy. Ity karazana fampiharana ity dia mamonjy tanjaka ara-batana sarobidy an'ny mpamonjy ary manatsara tokoa ny fahombiazan'ny famonjena. Rehefa ilaina ny famonjena amin'ny halavirana lavitra (ivelan'ny faritra hita maso), ny life life buoy dia afaka miara-miasa amin'ny drone mba hanavotana telo-telo. Ity rafi-panavotana tsy manam-pahefana intelon-telo izay manambatra ny rivotra sy ny rano ity dia manatsara be ny habaka famonjena ary mampitombo ny fomba famonjena.
2. Fomba fiasa ara-teknika
2.1 refy: 101 * 89 * 17cm
2.2 Lanja: 12Kg
2.3 Fahaiza-manavotra: 200Kg
2.5 Hafainganam-pandeha tsy misy enta-mavesatra: 6m / s
2.6 Haingam-pandeha: 2m / s
2.7 Faharetan'ny bateria haingam-pandeha: 45min
2.8 Halavirana fanaraha-maso lavitra: 1.2Km
3.1 Ny akorandriaka dia vita amin'ny fitaovana LLDPE miaraka amin'ny fanoherana tsara, ny insulation elektrika, ny hamafin'ny hatsiaka ary ny fanoherana mangatsiaka.
3.2 Fanavotana haingana amin'ny dingana rehetra: hafainganam-pandeha: 6m / s; hafainganam-pandehan'ny olona (80Kg): 2m / s.
3.3 Ny fifehezana lavitra karazana basy dia azo ampiasaina amin'ny tanana iray, tsotra ny fandidiana, ary ny mpamonjy aina dia azo fehezina tsara araka ny tokony ho izy.
3.4 Tsarovy ny fanaraha-maso lavitra lavitra mihoatra ny 1.2Km.
3.5 Manohana ny rafitra fametrahana GPS, fametrahana toerana tena izy, fametrahana toerana haingana sy marina kokoa.
3.6 Tohano ny fiverenana bokotra bokotra iray ary ny fiverenan'ny fiara mihoatra.
3.7 Tohano ny familiana amin'ny lafiny roa, miaraka amin'ny fahafaha-manavotra amin'ny oram-baratra.
3.8 Tohano ny torolàlana fanitsiana manan-tsaina, fandidiana marina kokoa.
3.9 Fomba entina mandroso: ampiasaina ny propeller propeller, ary latsaky ny 1 metatra ny tadin'ny fihodinana.
3.10 Ampiasao ny bateria lithium, ny fiainana bateria haingam-pandeha dia lehibe kokoa noho ny 45min.
3.11 Fiasa fanairana bateria ambany mifangaro.
3.12 Ny hazavana fampitandremana fidirana avo lenta dia mety hahatratra ny toeran'ny tsipika fahitana amin'ny alina na amin'ny toetr'andro ratsy.
3.13 Sorohy ny ratra faharoa: ny mpiambina manohitra ny fifandonana dia manakana ny fahasimban'ny vatan'olombelona mandritra ny fandrosoana.
3.14 Fampiasana vonjy maika: lakilasy 1 hanombohana, fanombohana haingana, vonona hampiasaina rehefa latsaka anaty rano.
Fanaraha-maso sy fanamarinana ny ivon-toerana fanaraha-maso kalitao nasionaly sy ivotoerana fanaraha-maso
Fankatoavana karazana fankatoavana an'ny sokajin'ny sokajin'ny sokajy Sina (CCS)
Teo aloha: Robot fanaraha-maso lavitra an'ny ROV-48 mpamonjy rano
Manaraka: RXR-M80D Robot Miady amin'ny afo
QXWB-22 Ala Afo finday avo lenta ...
JF2000 Bolometatra azo entina
YSD 130Ny haavon'ny feo nomerika azo antoka ...
Fametrahana Hydraulika napetraka GYJK-25-18